यस्तो यस्तो पो खोजिबस्दा रैछन् नेपालीहरु इन्टरनेटमा - Valley Khabar
Homeमनोरन्जनयस्तो यस्तो पो खोजिबस्दा रैछन् नेपालीहरु इन्टरनेटमा
नेपालीहरु इन्टरनेटमा के सर्च गर्दा रहेछन्? अरुतिर त थाहा भएन तर गुगल वा अन्य सर्च इन्जिनमा कसैले केही टाइप गरेर खोज्यो र त्यसैमार्फत् माइसंसारमा क्लिक गरेमा त्यो यताबाट (वर्डप्रेसको सर्च टर्ममार्फत्) हेर्न मिल्छ। कहिलेकाहीँ त त्यस्ता वाक्यबारे माइसंसारमा कुनै वाक्य पनि लेखिएकै हुँदैन। तर पनि कसरी उनीहरु सर्च गरेर आइपुगे, अनौठो लाग्छ। केही ज्यादै अश्लील कुरा यहाँ राख्न मिल्ने छैन। हेर्नुस् यो ३० दिनका अनौठा ५५ वाक्य (सर्च टर्म जस्तो हो त्यस्तै राखिएको छ, शुद्धाशुद्धी मिलाइएको छैन)–
१) असार पन्ध्र मा धान रोप्न जादा को रमाइलो
२) बाख्रा पाल्ने तरिका
३) नेपाली यैान कथा
४) मुत्रपान के लाभ
५) upendra mahato vs binod chaudhary
६) पृथ्बी कहिले उत्पती भयो
७) हामरो नेपाल राष्ट्रीय पनंछी भने को के हो
८) चेली बेच बिखन बारे निबन्ध
९) धोका दिने लाई केभनो खै
१०) मान्छे मोटाउने आैषधि
११) जस् ले जसो भने पनि नेपाली सग
१२) बुद्धको उपदेस
१३) मान बा बुडा
१४) कर्मचारी नियमावली यातायात छेत्र
१५) स्वार्थी दुनिया र स्वार्थी केटि को कुनै भर हुदैन
१६) मानिस का उच्च बिचार
१७) कुवेत मा नेपाली केटी
१८) मगर हरुको गरिबी प्रतिसत कति छ?
१९) नेपालमा आएको earthquake को बारेमा केही जानकारी
२०) कोरीयन केटा केटीको फोटोहरु
२१) तहगत तलब नेपाली
२२) चिक्दा के हुन्छ
२३) भाउजु र म
२४) नेपाली याैन कथा र साथी
२५) यौन जन्य हिंसा को प्रयास को कानुन र सजाय
२६) बर्मेली नेपाली को अवस्था
२७)दिशा आउन के गर्नु पर्छ
२८) ntc मा फस्ट नेट चलाउन के गर्नु पर्छ
२९)जनजातिमा धनी जनजाती कुन हो?
३०) बुढि को बुबु
३१) नेपाल लाई कालो दिन भनेर कुन दिनलाइ चिनिन्छ?
३२) श्रीमान श्रीमती को सम्बन्ध सुधार्ने उपाय
३३) क्यानाडा छिर्ने सजिलो उपाय
३४) आइमाइको यौन भावना कसरी बुझ्ने
३५) कसरी जीवन लाई परिवर्तन गर्ने
३६) blod presser भयो भने के गर्ने
३७) कल्पना को सागार किन बिछोड भयो
३८) ईमेल या फोन मलाई लेखन आउदैन
३९) प्रेमी र प्रेमीका बिचको नेपाली चिठीहरू
४०) कस्तो स्वभाबको मान्छे राम्रो
४१) नेपाली डन को अबस्था
४२) नहुनु थियो चिनो जानो फेसबुक ले बनायो
४३) नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ३८(क) मा के लेखेको छ?
४४) एनजिओ र आइएनजिओ को कर्तुत
४५) नेपालि divorce कानुन
४६) बिदेश मा रहेका श्रीमान खुसी बनाउने उपाय
४७) बियर खानु शरीरको लागि फाइदा
४८) जिउमा बढी रौ हुने महिला हरु
४९) बिबाह गरेका महिलाको चाहना
५०) कौवाले कति पटक अण्डा दिन्छ?
५१) के गर्भ रहेको बेला महिनावारि हुन्छ
५२)3महीनाको गर्भमा भएको बच्चा केटा वा केटी हो भनि कसरी थाहा पाउने ?
५३) खरदार भनेको के हो?र खरदार को काम के हो?
५४) शुसिल कोइराला जी तपाई कहि जनतालाई समबिधान कहिले दिनछौ त
५५) मामा को छोरी बिहे गर्न क्षेत्री समुदाय मा पाइन्छ?
नेपालमा इन्टरनेट मार्केटिङको अवस्था
इन्टरनेटको प्रयोगकर्ताहरु दिनानुदिन नेपालमा बढ्दै गइरहेको छ । अझ त्यो भन्दा पनि बढि पछिल्लो पटक निकै चर्चामा रहेको सामाजिक सञ्जालहरु । आजकल हरेक स्कुलका स–साना किशोरीहरु देखि लिएर पढेलेखेका पाकासमेतले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको उपयोग गरिरहेका छन् । यो खुशीको कुरा हो । जे भए पनि प्रबिधिको नगिचमा रहेर हामीले प्रबिधिलाई सहि सदुपयोगमा ल्याइरहेका छौ । अब बिस्तारै मान्छेहरुले मोबाइल फोनको उपयोग गर्न छाड्ने सम्भावना पो प्रबल देखिन्छ ।
तृष्णा गुरुङ । उहाँ बाग्लुङबाट आइबिएनमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।
ब्यक्तिगत रुपमा नेपालीहरुले इन्टरनेटको प्रयोग गरेर लाभ त लिई नै रहेका छन् । क्षणभरमै टाढाको आफन्तहरुसँग भनेको समयमा चाहेजति कुरा गर्न पाइने, त्यहाँको बाताबरणको बारेमा बुझ्न सकिने, आफ्नो बारेमा पनि आफन्तहरुलाई जानकारी दिन सकिने खालको अवसर इन्टरनेटको सामाजिक सञ्जालहरुले दिइरहेका छन् । यसरी नै इन्टरनेटमा रहेर काम गर्ने अवसरहरु पनि थुप्रै छन् ।
कुनै समयमा डाटा इन्ट्रि काम नेपालमा पनि खुबै प्रख्यात थियो । विभिन्न कम्पनीहरुको डाटाहरु भर्नुपर्ने, डाटा भर्ने फर्म पनि उपलब्ध कम्पनीले नै उपलब्ध गरिदिने र म्याटर पनि उनीहरुले नै दिने आफुले सिर्फ कपि र पेष्ट मात्र गरेर हजारौ फर्महरु भर्नुपर्ने काम प्रख्यात थियो । दैनिक हजार भन्दा बढि डाटा भर्नै पर्ने खालको काम हुन्थ्यो र मासिक रुपमा ति कम्पनीका एजेन्टहरुले टार्गेटको अनुसारले काम गर्ने कामदारहरुलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराइदिन्थ्यो । अहिले पनि त्यो काम कतिपय नयाँ अनलाइन जब गर्न चाहाने यूवा बिद्यार्थीहरुले गरिरहेका छन् ।
ब्लगिङ पनि खुबै चर्चाको बिषय थियो । कुनै पनि बिषयमा एउटा राम्रो ब्लग निर्माण गरेर सम्बन्धित ब्यक्तिहरुलाई राम्रो जानकारी दिने माध्यम हो ब्लग । जति धेरै ब्यक्तिहरुले उक्त ब्लग हे¥यो त्यति नै धेरै आम्दानी ब्लग मालिकलाई आउने गथ्र्यो । नेपालमा पनि अधिकांश ब्यक्तिहरुले अधिक ब्लग निर्माण गरे । विभिन्न बिषयमा आधारित भएर राम्रा लेखहरु ब्लगमा समावेश हुन्थ्यो । धेरैले राम्रा आम्दानी पनि गरेका छन् । ब्लगलाई आधार बनाएर पछिल्लो पटक त डिजिटल पत्रिकाहरुले राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन् । पंक्तिकार आफै पनि यो बिषयमा बिगत ७ बर्ष अघि देखि अध्ययन अनुशन्धान कार्यमा सरिक रहि आएको छ ।
अनि अर्को पनि बडो काइदाको आम्दानी छ इन्टरनेटमा । त्यो हो भिडियो मार्केटिङ । इन्टरनेटमा बहुत चलेको वेबसाइट हो युट्युब डट कम । गुगलले करोडौ डलरमा तिरेर किनेको हो–युट्युब अर्थात बिश्वब्यापी भिडियोहरुको संग्राहलय । युट्युबमा कुनै पनि भिडियो अधिक रुपमा दैनिक हेर्ने मान्छे भयो भने राम्रो कमाउने अवसर छ । जस्तो एउटा गीतको म्युजिक भिडियो युट्युबमा हजारौले हेर्छन् भने त्यो भिडियो राख्ने युजरले कम्तीमा पनि दैनिक ३ डलर भन्दा माथि आम्दानी गर्न सक्छ । हाम्रो नेपालमा पनि सुन्नमा आएको हो । ब्यबहारमा कतिको सत्य छ कुन्नि । नेपाली म्युजिक कम्पनीहरुले अब युट्युबमा भिडियो हेरे बापत गायक, संगीतकार, गीतकारलाई रोयल्टी आउने मेलोमेशो मिलाइदिएको छ रे । सुन्दामा चाहि साह्रै रमाइलो ।
पछिल्लो पटक सामाजिक सञ्जाल फेसबुक जस्तै अर्को सञ्जाल पनि जन्मिसकेको छ । त्यो सञ्जालको वेबसाइट इन्टरनेटको बजारमा अत्यन्त प्रख्यात हुदै छ । वेबसाइटको नाम फ्यानबक्स डट कम । सबै फेसबुक जस्तै । एकाउन्ट खोल्न मिल्ने, ब्यक्तिगत प्रोफाइल बनाउन मिल्ने, कमेन्ट गर्न मिल्ने, फोटो राख्न मिल्ने, भिडियो राख्न मिल्ने, साथी बनाउन मिल्ने, च्याट गर्न मिल्ने सबै दुरुस्तै । तर फ्यानबक्समा रहेको हाम्रो प्रोफाइलको स्टाटसमा कुनै साथीले कमेन्ट गरिदिए हामीलाई पैसा आउछ । फोटोमा कमेन्ट गरिदिए राम्रो पैसा आउछ । युट्युबको भिडियो फ्यानबक्सबाट हेरिदिए त्यहाँपनि हेरेबापत पैसा आउछ । अझ फ्यान्बक्सको माध्यमबाट कुनै पनि सामान आफ्नो साथीहरुलाई बेच्न सकियो भने अपेक्षा गरे भन्दा बढि पैसा आउछ । यो वेबसाइटलाई म चाहि फेसबुक र अमेजोन डट कमको मिश्रण मान्छु ।
अब अलिक इन्टरनेटमै रहेर पनि पेशागत रुपमा कार्य गर्न सकिने खालको (प्रोफेसनल वर्क) कुरा गरौ । फ्रिल्यान्सर डट कम, गुरु डट कम, ओडेष्क डट कम जस्ता वेबसाइटहरुले आजको यो समयसम्म बिश्वका करोडौ ब्यक्तिहरुलाई रोजगारी दिइरहेका छन् । नेपालमा पनि धेरै ब्यक्तिहरुले यो वेबसाइटहरुको माध्यमबाट काम पाइरहेका छन् । आम्दानी पनि राम्रै गरेका छन् । यो चाहि कस्तो खालको हो भन्देखिन् यदि यक्तिसँग कुनै बिषयमा दक्ष सीप छ भने त्यो सीपलाई बेच्ने काम ति माथिका वेबसाइटहरुले गरिदिन्छन् । मानौ कुनै एक ब्यक्ति राम्रो वेब डिजाइन गर्न सक्छ भने त्यो वेब डिजाइनिङको काम उनले ति माथिका वेबसाइटहरुमा खोजेर राम्रो मुल्यमा काम प्राप्त गर्न सक्छ । प्रबिधिको बिषयसँग मात्र सम्बन्धित नभएर अन्य बिषयहरु जस्तै प्रपोजल राइटिङ, कन्टेन्ट राइटिङ, बिजनेश प्रेजेन्टेशन जस्ता कामहरु पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
यि माथिका सबै हिजोको समयमा चल्दै आएका अनलाइन बिजनेश अर्थात अनलाईन जबको बारेमा संक्षिप्त कुरा गरियो । अब अहिलेको नबिनतम(लेटेष्ट) अनलाइन बिजनेश पनि नेपालमा भित्रिसकेको छ । त्यो हो इन्टरनेट एफिलेट मार्केटिङ । यो काम कम्प्युटरमा अत्यन्त न्युन ज्ञान भएका ब्यक्तिहरु जोसुकैले पनि गर्न सक्छ । अत्यन्त सानो लगानीबाट काम गर्न सकिने इन्टरनेट एफिलेट मार्केटिङ थोरै समयमा राम्रो मेहनत गर्न सकियो भने सोचेभन्दा बढि आम्दानी गर्न सकिन्छ । यसमा धेरै समय अनलाइनमा खर्चिनु पनि पर्दैन । धेरै लगानी लगाइराख्न पनि पर्दैन । मात्र आफुले काम गर्ने कम्पनीको बारेमा अनलाइनको माध्यमबाट जानकारी दिएर ब्यापार गर्ने हो । अर्थात अरु इच्छुकहरुलाई एफिलेट गर्ने हो ।
पैसा आउछ त भनियो । तर कसरी आफुले इन्टरनेटमा कमाएको पैसा हात पर्छ त ? इन्टरनेटको एकाउण्टहरुमा धेर थोर डलर त कमाइएला । त्यसलाई कम्प्युटरबाट सिधै तान्ने कुरा पनि हावाको कथा जस्तो मात्र हुन्छ । यो प्रश्न तपाईहरुमा पनि होला । पैसा हातमा आइपुग्नको लागि अनलाइन पेमेन्ट प्रोसेसरहरु प्रशस्त छन् । पेपल, पेजा, सोलिडट्रष्ट जस्ता प्रोसेसरको माध्यमबाट ब्यांकमा भेरिफाइड गर्न सकिन्छ । जुन एकाउन्टमा स्विफ्ट कोडको प्रयोग हुन्छ । तिनको माध्यमबाट तपाईको खातामा पैसा जम्मा हुन्छ । नत्र अर्को सजिलो उपाय यदि तपाईसंग बिश्वभरी चल्ने मास्टरकार्ड छ भने ति मास्टरकार्डको माध्यमबाट पनि पैसा झिक्न सक्नुहुन्छ ।
यि सबै कुराहरुको जरासम्म पुग्नको लागि नेपालीहरु निकै समय लाग्छ । तर प्रबिधिको यस्तै तिब्र बिकास भइरह्यो भने चाहि भन्न सकिन्न सबैले भोलिको समयमा राम्ररी थाहा पाइसक्नेछन् । यि सबै कुराहरु नेपालमा गर्न कुनै नीति नियमहरु बनिसकेको छैन । एउटा ब्यवस्थित नीति र सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राख्ने हो भने नेपाली यूवाहरुको लागि यो अत्यन्त उपयोगी छ । फलदायी छ । रोजगारी पाउने ठुलो माध्यम बन्छ । अवसर बन्छ । मध्यम आम्दानीको लागि बिदेशीनु जरुरी छैन । यो एउटा सहज कार्य हो ।
यति जानकारी भइसकेपछि पंक्तिकार आशा राख्दछ कि अहिले बाटै फुर्सदिला यूवाहरुले प्रयाश गरुन् । इन्टरनेटमा इन्टरप्रेनर बन्नको लागि । शुभकामना